निर्मला प्रकरणमा पत्रकार खेम भण्डारीको भूमिका शंकास्पद, बयान दिने महिला प्रहरी सम्पर्कमा ! (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
निर्मला प्रकरणमा पत्रकार खेम भण्डारीको भूमिका शंकास्पद, बयान दिने महिला प्रहरी सम्पर्कमा ! (भिडियो)
काठमाडाैँ । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरेको एक बर्ष बित्दा पनि हत्यारा पत्ता पक्राउ परेको छैन । केही प्रमाणहरुले यसअघि पक्राउ परी छाडिएका दिलिप सिंह विष्टलाई दोषी देखाईरहेका बेला उन्का भिनाजु पर्ने भनिएका कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारी भने निर्मलाका दोषी कोही भिआईपी भएको भन्दै सवैको ध्यान बाडिरहेका छन् ।
गएको कार्यक्रममा निर्मलाको हत्या भएका दिन विष्टलाई त्यही नजिकको सडकमा देख्ने महिलाले आफ्नो बयान प्रहरीलाई दिईसकेकि छिन् । दिलिपसिंह विष्टले अपराध स्विकार गरेको साविकी बयान दिईसकेको जुन कुरा घटना स्थल प्रकृति र अनुसन्धान विष्लेष्णमा समेत मेल खाएको अवस्थामा ति महिलाले दिलिपसिंह विष्टलाइ घटनाको सम्भावित समयमा उक्त घटना स्थल तर्फ जार्दै गरेको पुष्टि गरिदिनाले यो घटना विष्टले गराएको भन्ने कुरालाई थप बल पु¥याएको छ ।
प्रत्यक्ष देख्ने महिला प्रहरीको सम्पर्कमा पुग्दा पनि पत्रकार भण्डारी भने यो प्रायोजित भएको भनिरहेका छन् । कुरा खेम भण्डारीबाटै शुरु गरौ । निर्मला पन्तका दोषीलाई कार्वाही हुनु पर्छ भनि शुरु देखी आवाज उठाउने खेम भण्डारी र उन्को पत्रिका र अनलाई मानस खण्ड हो । तर निर्मला प्रकरणमा उनि पत्रकार भन्दा पनि अधिकारकर्मी बढी भए । आन्दोलन हुनुमा उन्को पनि ठुलो भुमिका देखिन्छ ।
यति मात्रै होईन कञ्चनपुरका तत्कालिन एसपी डिल्ली विष्टलाई त भण्डारीले दिलिप आफ्नो सालो भएको भन्दै चुनौति दिएका थिए । भण्डारीको यो एसएमएस हेर्नुहोस्- फर योर काइन्ड ईन्फरमेसन दिलिप ईज माई साला । अर्थात तपाईको जानकारीका लागि बताउ दिलिप मेरो सालो हो ।
यो एसएमएस भण्डारीले प्रहरीले दिलिपसिंह विष्टलाई अभियुक्त बनाई सार्वजनिक गर्नु अघिनै उन्ले एसपीलाई पठाएका थिए । त्यसपछि पनि घटना कुनै भिआईपीले गरेको र त्यो भिआईपिलाई बचाउन प्रहरीले सुनियोजित रुपमा प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै उन्ले सवैको ध्यान अन्त्यै धकेल्ने प्रयास गरिरहे ।
उन्का यी पोषटहरु हेर्नुहोस्-
भिआईपी हत्याराको बुद्धी फिरेको रहेछ । झन् फस्दै गयो हत्यारा ।
गाउं गाउं बाट उठ निर्मलाको भिआइपी हत्यारा समात्न बस्ती बस्तीबाट उठ ।
अव छोडिन्न । कसैले पिठयुबाट गोली हाने पनि निर्मलाका भीआईपी हत्यारालाई नंग्याउने अभियानमा सरिक भएको छु ।
स्मरण रहोस् भण्डारीले सधैँ निर्मलाका दोषी भिआईपी भएको भन्दै निर्मलाका पक्षमा आवाज उठाउनेहरुलाई आन्दोलित गराउँदै गए । र आन्दोलनबाट बलेको आगोको रापमा आफ्ना कुरा पत्याउन बाध्य पर्दै गए । यति मात्रै होईन उन्ले आन्दोलित मासको सेन्टिमेन्ट लिन म त्यो भिीआईपी बलात्कारी र हत्याराको भण्डााफोर गर्दैछु । को को हुनुहुन्छ साथमा ? फेसबुकमा मात्रै साथ दिएर भएन मेरो भौतिक शरिर वरपर को हुनुहुन्छ भनि पोष्ट गरे ।
भण्डारीले पटक पटक भिआईपी भनिएका निर्मलाका दोषी पत्ता लगेको भन्दै भोलीनै सार्वजनिक गरिदिने भन्दै पोष्टहरु गरिरहे । तर यि सवै षोष्ट मुद्धालाई विषयान्तर गर्नका लागि मात्र लेखेको देखिन्छ । उन्का स्ट्याटस, पत्रिका र अनलाईनले मिडिया, पब्लिक, प्रहरीको नेतत्वर र सरकारलाई दिगभ्रमित गरिरहे । जवकी निर्मला प्रकरणमा भण्डारीले भनेका सवै कुरा पुरा भएका छन् ।
भण्डारीले शुरुमा स्थानिय प्रहरीलाई नभई निर्मला प्रकरण वारे सिआईबीलाई अनुसन्धान गर्न लगाउनु पर्ने माग राखे । उन्को त्यो माग पुरा भयो जव सरकारले सिआईबीबाट डिएसपी अंगुर जिसीको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली कञ्चनपुर पठायो ।
सिआईबीबाट गएको टोलीले अनुसन्धान पुरा गरी दिलिपसिंह विष्ट पक्राउ गरि सार्वजनिक गरेपछि भण्डारीले आन्दोलनको आवहन संगै एसपी विष्टलाई हटाई उच्च स्तरिया छानविन समिति गठन गर्न अर्काे माग गरे । उन्को त्यो माग पनि पुरा भयो र फलस्वरुप सरकारले भदौ ७ गते एसपी विष्टलाई हटाई सह सचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यिक उच्चस्तरिय छानविन समिति गठन गर्यो ।
यस पछि भण्डारीले सिआईबीको टोली र अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीलाई पनि हटाईनु पर्ने माग राखे । अंगुर जि.सी.को टोली र जिल्लाका अन्य प्रहरी अधिकृतहरु गरी १२ जनालाई कन्चनपुरबाट हटाई निलम्वन गर्नु पर्ने उनको फेसबुक स्टाटस र मानसखण्ड दैनिक पत्रिकामा लेखियो । सरकारले पनि उन्ले भनेजस्तै भदौ ९ गते उक्ता टोलीलाई हटायो र भदौ ३१ गते अंगुर जिसी लगायत ५ जनालाई निलम्वन गरियो ।
भण्डारीले फेरी तत्कालिन एसपी विष्ट, उन्का छोरा र मेयरका भतिजा नै अपराधि हुन सक्ने भन्दै तिनै जनाको डिएनए परिक्षणको अर्काे माग राखे । सरकारले ईतिहासमै पहिलो पटक जिल्ला प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तीले नै बलात्कार र हत्या गरेको हुन सक्ने भन्दै बावु छोराको डिएनए एकै पटक परिक्षण ग¥यो । जुन घटनाले नेपाल प्रहरीको मनोवल नै गर्यो ।
खेम भण्डारीले आफ्नो फेसवुकमा लेखेका सवै कुरा सरकारले पुरा गर्दै गयो । भण्डारीले निलम्वनले पुग्दैन एसपी लगायत अनुसन्धानमा खटिएका सबै प्रहरीलाई बरखास्त गर्नु पर्यो भन्ने अर्काे माग पनि राखे । त्यो मागलाई पनि एसपी बिष्ट र इन्सपेक्टर जगदिश भट्टलाई बर्खास्त गरी सम्बोधन गरियो ।
यसपछि पनि भण्डारीले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरुलाई बर्खास्त र निलम्बनले मात्र पुग्दैन भन्दै प्रमाण नष्ट र यातना दिएको अभियोगमा फौजदारी अपराध संहिता अनुसार जेल हाल्नु पर्छ भने । त्यसै अनुरुप ८ जना प्रहरी विरुद्ध २ ओटा मुद्धा दर्ता भए जुन अहिले अदालतमा विचाराधिन छ ।
त्यती मात्रै होईन अदालतमा मुद्धा दर्ता भईसकेपछि पनि उन्ले अदालतलाई समेत प्रभावमा पार्न एसपी विष्टको थुनछेक आदेशको अघिल्लो दिन भोली महेन्द्रनगरमा दिपावली हुने सम्मान छ भन्दै एसपी विष्टलाई थुने सवै जनता खुुसी हुन्छन भन्ने आसयको स्ट्यास लेखे ।
अदालतमा रहेको मुद्धाका विषयमा अस्पष्टता भएपछि जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले एमिकस क्युरीको माग ग¥यो । अनि जिल्ला वार र उच्च वारबाट एक एक जना प्रतिनिधि वकिल माग ग¥यो । फलस्वरुप जिल्ला बारले हरेन्द्र विष्ट र उच्च बारले थानेश्वर भट्टलाई पठाउने निर्णय गर्यो । यहि निर पत्रकार भण्डारीले वकिल हरेन्द्र विष्ट एसपी विष्टको नाता पर्न भनि स्ट्याट्स लेखे । भण्डारीको यो स्ट्याटस पछि वकिल बिष्ट बहशमै गएन्न् र भण्डारीले अदालतको मानहानी गरेको भनि जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा मुद्धा दायर ग¥यो । सो मुद्धामा भण्डारीको कसुर प्रमाणित भयो र उन्लाई फेसवुक स्टा्टस हटाई माफि मागेमा माफि पाउने अन्यथा एक घण्टा जेल सजाय र १ रुपयां जरिवाना हुने फैसला सुनायौ । भण्डारीले माफि मागेनन् ।
यति मात्रै होईन भण्डारीको प्रभाव प्राय सवै जसो मुलधार मिडियाहरुमा समेत देखियो । भण्डारीले निर्मला प्रकरणमा छानविन गर्न बनेको समितिले किन लुकायो यि प्रश्नहरुको जवाफ भनि लेखेको १० बुदे स्ट्याटस मुलधारको पत्रकाले छाप्यो ।
यति मात्र होइन पत्रकार भण्डारीले निर्मला पन्तकी आमालाई समेत सन्तानको लास बेच्न सक्ने पनि आमा हुन्छन भनि स्ट्याटस लेखे । बलत्कृत भई छोरीको हत्या हुनुमा निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्त भन्दा बढी कसलाई पिडा हुन्छ होला र ? दुर्गा देवीले न्याय नपाएकै बिषय कठोर ह्दय हुन्छन् भनिएका प्रहरी अधिकारी अंगुर जिसीले स्टुडियोमै आसु खसाले ।
आफ्नी छोरी बलात्कृत भएर हत्या भएको चोट बोकेर बाचेकी आमा माथिको निर्मम शब्द प्रहार यो समाजका जिम्मेवार व्यक्तीबाट हुनु कति स्वभाविक होला ? यि सवै कुरा हेर्दा आन्दोलन र अस्थिरतामा एक जिम्मेवार पत्रकारको भुमिका शंकास्पद देखिन्छ ।